Ch 5 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 5 John
5:1 Rehefa afaka izany,, dia nisy andro firavoravoan'ny Jiosy andro, ary dia niakatra tany Jerosalema i Jesosy.
5:2 Ary tany Jerosalema no Dobon'i ny Porofo, izay amin'ny teny Hebreo dia fantatra ho toy ny toerana ny famindram-po; izany dia manana dimy porticos.
5:3 Along no nandrian'ny Maro be koa ny marary, ny jamba, ny mandringa, ary ny malazo, miandry ny hetsika ny rano.
5:4 Ary amin'ny fotoana nisy anjelin'ny Tompo dia midina any an-dobo, ary toy izany koa ny rano dia nihorakoraka. Ary na iza na iza nidina ho any amin'ny farihy, araka ny mihetsika ny rano, sitrana izy kilema na inona na inona natao azy.
5:5 Ary nisy lehilahy anankiray tany amin'io toerana io, rehefa teo amin'ny ny aretiny nandritra ny valo amby telo-polo taona.
5:6 Avy eo, rehefa nahita azy Jesosy nipetraka nihinana, ary rehefa takany fa izy efa nijaly nandritra ny fotoana ela, hoy izy taminy:, "Moa ve ianao te-ho sitrana?"
5:7 Ny mety namaly azy: "Tompo ô, Tsy manana olona handroboka ahy ao amin'ny farihy, raha ny rano efa nanome fo. Fa tahaka ahy handeha, hafa midina mialoha ahy. "
5:8 Fa hoy Jesosy taminy, "Mitsangàna, betao ny filanjana, ka mandehana. "
5:9 Ary niaraka tamin'izay ilay lehilahy sitrana. Dia nitondra ny filanjana ary nandeha. Ary androany dia ny Sabata.
5:10 Noho izany, ny Jiosy hoy izy tamin'ny anankiray, izay efa sitrana: "Ny Sabata. Tsy Mety aminareo va ny betao ny filanjana. "
5:11 Fa ralehilahy namaly azy, "Ilay nahasitrana ahy, dia hoy izy tamiko, Hoe: Ento ny filanjana ka mandehana. ' "
5:12 Noho izany, dia nanontany azy, "Iza moa izany olona, izany Izay nanao taminao, Hoe: Ento ny fandrianao, ka mandehana?'"
5:13 Fa ny olona izay efa nomena ny fahasalamana dia tsy fantatro hoe iza izany. Fa i Jesosy niala avy teo amin'ny vahoaka nivory tao amin'io toerana io.
5:14 Rehefa afaka izany,, Hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tempoly, ka hoy izy taminy:: "Indro, efa sitrana ianao. Aza mifidy ny hanota bebe kokoa, raha tsy izany dia mety zavatra ratsy noho ny hanjo anao. "
5:15 Izany lehilahy izany dia lasa, ary nilaza tamin'ny Jiosy fa Jesosy no efa nanome azy ny fahasalamana.
5:16 Noho io, ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy, fa izy nanao izany zavatra izany tamin'ny Sabata.
5:17 Fa Jesosy namaly azy, "Na ankehitriny, Raiko dia miasa, ary miasa aho. "
5:18 Ary noho izany, noho io, ny Jiosy dia nitady hamono azy bebe kokoa izany. Fa tsy vitan'ny hoe hilatsaka ny Sabata, fa izy mihitsy aza nilaza fa Andriamanitra no Rainy, nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra.
5:19 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: "Amen, amena, Lazaiko aminareo, ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona mba ho Azy, afa-tsy izay hitany ataon'ny Ray. Fa na inona na inona ataony, na dia izany aza no Zanaka, toy izany koa.
5:20 Fa ny Ray tia ny Zanaka, ary mampiseho azy izay rehetra ataon'ny tenany. Ary asa lehibe noho ireny no hasehony Azy, loatra mba ho gaga.
5:21 Fa toy ny ananganan'ny Ray ny maty ka manome fiainana, Dia tahaka izany koa ny Zanaka no manome fiainana ho an'izay izay sitrapony,.
5:22 Fa ny Ray dia tsy mitsara na iza na iza. Fa nomeny ny fitsarana rehetra dia ny Zanaka,
5:23 ka mba hanajan'ny olona rehetra ny Zanaka, tahaka ny fanajany ny Ray. Izay tsy manaja ny Zanaka, tsy manome voninahitra ny Ray izay naniraka Azy.
5:24 Amen, amena, Lazaiko aminareo, fa na iza na iza mandre ny teniko, ka mino Izay naniraka Ahy, manana ny fiainana mandrakizay, ary tsy mandeha amin'ny fitsarana, fa izy kosa miampita avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana.
5:25 Amen, amena, Lazaiko aminareo, fa avy ny andro, fa efa, raha izay handrenesan'ny maty ny feon'ny Zanak'Andriamanitra; ary izay mandre dia ho velona.
5:26 Fa toy ny Ray manana fiainana ho Azy, dia toy izany koa no izy nanome ny Zanaka mba hanana fiainana ho Azy.
5:27 Ary nomeny azy ny fahefana hanatanteraka ny fitsarana. Fa Izy no Zanak'olona.
5:28 Aza gaga amin'izany. Fa avy ny andro izay rehetra any am-pasana dia handre ny feon 'ny Zanak' Andriamanitra.
5:29 Ary ireo izay nanao tsara dia hiala ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana. Na izany aza tena, ireo izay nanao ratsy dia ho any amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho amin'ny fanamelohana.
5:30 Tsy zakako izaho manao na inona na inona ho Ahy Aho. Araka izay reko, toy izany no mitsara. Ary marina ny fitsarako. Fa Izaho tsy mitady ny sitrapoko Aho, fa ny sitrapon'izay naniraka Ahy.
5:31 Raha manolotra fijoroana ho vavolombelona momba ny tenako, ny fijoroako ho vavolombelona tsy marina.
5:32 Misy iray hafa izay manolotra fijoroana ho vavolombelona momba ahy, ary fantatro fa ny fijoroana ho vavolombelona izay ateriny Ahy marina.
5:33 Ianao naniraka tany amin'i John, ka nanatitra fanatitra fijoroana ho vavolombelona ny fahamarinana.
5:34 Fa Izaho tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona. Fa tsy, Lazaiko izany zavatra izany, mba ho voavonjy.
5:35 Izy dia jiro nirehitra sy fahazavana mamirapiratra. Noho izany dia vonona, tamin'ny fotoana, ho ravoravo ny fahazavany.
5:36 Fa hanao fijoroana ho vavolombelona lehibe kokoa noho Jaona. Fa ny asa izay nomen'ny Ray ahy, ka mba hamita azy, ireo asa-tena izay ataoko, manolotra fijoroana ho vavolombelona momba ahy: fa ny Ray efa naniraka Ahy.
5:37 Ary ny Ray izay naniraka ahy no manana fijoroana ho vavolombelona momba ny tenany nanolotra ahy. Ary efa nandre ny feony na oviana na oviana, na Mahita ny tarehiny.
5:38 Ary tsy manana ny teniny mitoetra ao anatinareo,. Fa ny olona izay naniraka, toy izany koa ianareo tsy mino.
5:39 Halalino ny Soratra Masina. Fa ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay. Nefa izy ireo koa dia manolotra fijoroana ho vavolombelona momba ahy.
5:40 Ary ianareo tsy mety manatona ahy, mba hanananareo fiainana.
5:41 Tsy mandray voninahitra avy amin'ny olona.
5:42 Fa fantatro ianareo, fa tsy manana ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatinareo.
5:43 Izaho dia avy amin'ny anaran'ny Raiko, ary tsy manaiky ahy. Raha misy hafa ho tonga amin'ny anaran'ny tenany anefa, izy dia horaisinareo.
5:44 Ahoana no afaka mino ianao, ianareo izay manaiky voninahitra avy amin'ny hafa nefa tsy mitady ny voninahitra avy amin'Andriamanitra irery ihany?
5:45 Aza mandinika mba hiampanga anareo amin'ny Ray. Misy dia ilay miampanga anao, Moses, in izay manantena.
5:46 Fa raha nino an'i Mosesy no, angamba ianareo, dia hino Ahy koa. Satria nanoratra momba ahy.
5:47 Fa raha tsy mino ny nosoratany, hataonareo ahoana no fino ny teniko?"